जीवन विकास लघुवित्तको आईपीओ प्रि-अलटमेन्ट आज हुँदै, बाँडफाँड कहिले ? - Arthasansar
जीवन विकास लघुवित्तको आईपीओ प्रि-अलटमेन्ट आज हुँदै, बाँडफाँड कहिले ?
सोमबार, २१ असार २०७८, १४ : १४ मा प्रकाशित
जीवन विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडकाे प्रि-अलटमेन्ट आज (साेमबार) हुँदैछ । आज ३ बजे प्रि-अलटमेन्ट हुन लागेकाे निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धक एनएमबि क्यापिटल लिमिटेडले जानकारी दिएकाे छ ।
प्रि-अलटमेन्ट सम्पन्न भएपछी सो को जानकारी नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई दिइन्छ र बोर्डको अनुमतिपछी आईपीओको बाँडफाँड गरिने प्रावधान छ । बाेर्डले स्वीकृती दिए बिहीबार नै आईपीओ बाँडफाँड गरिने भएकाे छ ।